A4 ကျော်စွာရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ညီမလေး ဆုံးပါးသွားပြီ – Daily Feed MM
Admin_John | August 18, 2020 | Cele | No Comments
Free Style Rap တွေရွတ်ရင်း ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့သူ A4 ကျော်စွာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက သူတတ်နိုင်သလောက်ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်ခဲ့တဲ့ ညီမလေး မနေ့က ညနေ(၄)နာရီမှာပဲဆုံးပါးသွာ းခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း စိတ်မကေ
ာင် းစွာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဆုံးပါးသွားတဲ့ညီမလေးကတော့ A4 ကျော်စွာ မပြေလည်ခဲ့စဉ်အချိန်တုန်းက ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ပန်းရောင်းရင်း A4 ကျော်စွာကို ကျွေးမွေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ညီမလေးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အသည်းရောင်
အသားဝါရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတက်ကုသခဲ့ပြီး A4 ကျော်စွာကတော့ သူတတ်နိုင်သမျှ သွားရောက်ကူညီပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီညီမလေးကတော့ မနေ့ကညနေ လေးနာရီမှာဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီး A4 ကျော်စွာ ကတော့ ကျေးဇူးရှင်ညီမ
လေးအတွက် ရင်ထဲကစကားတချို့ကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။” ဒီနေ့(၄)နာရီမှာဆုံးသွားရှာတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ညီမလေးပါ…. သူ့အသက်ရှင်စဉ်က သူအရမ်းကြိုက်တဲ့သီချင်းနဲ့ သူ့အပြုံးများကို နောက်ထပ်မ
တွေ့ရတော့ဘူးဆိုတာ…. သေချာသွားတဲ့အတွက် ပြောမပြတတ်လောက်အောင် ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါတယ်….. စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ညီမလေးမို့ ကောင်းရ ာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး ပါတယ်။ သူ့အတွက်ဝန်းရံပေးခဲ့တဲ့
တစ်ယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ညီမလေးအသက်ရှိစဉ်တုန်းက ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗွီဒီယိုလေးနဲ့အတူ စိတ်မကောင်းစွာ မျှဝေခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေအချိန်မတန်ခင် လူ့လောက ထဲက ထွက်ခွာသွားခဲ့
ရတဲ့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ညီမလေး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ A4 ကျော်စွာနဲ့အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ညီမလေးရေ။
Free Style Rap ေတြ႐ြတ္ရင္း ပရိသတ္အားေပးမႈရရွိခဲ့သူ A4 ေက်ာ္စြာကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့တဲ့ ညီမေလး မေန႔က ညေန(၄)နာရီမွာပဲဆုံးပါးသြာ းခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္မေက
ာင္ းစြာ မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။ဆုံးပါးသြားတဲ့ညီမေလးကေတာ့ A4 ေက်ာ္စြာ မေျပလည္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္တုန္းက ေ႐ႊတိဂုံဘုရားမွာ ပန္းေရာင္းရင္း A4 ေက်ာ္စြာကို ေကြၽးေမြးခဲ့ဖူးတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ညီမေလးပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက အသည္းေရာင္
အသားဝါေရာဂါနဲ႔ ေဆး႐ုံတက္ကုသခဲ့ၿပီး A4 ေက်ာ္စြာကေတာ့ သူတတ္ႏိုင္သမွ် သြားေရာက္ကူညီေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီညီမေလးကေတာ့ မေန႔ကညေန ေလးနာရီမွာဆုံးပါးသြားခဲ့ၿပီး A4 ေက်ာ္စြာ ကေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ညီမ
ေလးအတြက္ ရင္ထဲကစကားတခ်ိဳ႕ကို သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားမွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။” ဒီေန႔(၄)နာရီမွာဆုံးသြားရွာတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ညီမေလးပါ…. သူ႔အသက္ရွင္စဥ္က သူအရမ္းႀကိဳက္တဲ့သီခ်င္းနဲ႔ သူ႔အၿပဳံးမ်ားကို ေနာက္ထပ္မ
ေတြ႕ရေတာ့ဘူးဆိုတာ…. ေသခ်ာသြားတဲ့အတြက္ ေျပာမျပတတ္ေလာက္ေအာင္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းရပါတယ္….. စိတ္ဓာတ္ေကာင္းတဲ့ညီမေလးမို႔ ေကာင္းရ ာမြန္ရာေရာက္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး ပါတယ္။ သူ႔အတြက္ဝန္းရံေပးခဲ့တဲ့
တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ညီမေလးအသက္ရွိစဥ္တုန္းက ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဗြီဒီယိုေလးနဲ႔အတူ စိတ္မေကာင္းစြာ မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရအခ်ိန္မတန္ခင္ လူ႔ေလာက ထဲက ထြက္ခြာသြားခဲ့
ရတဲ့ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့ညီမေလး ေကာင္းရာမြန္ရာေရာက္ပါေစလို႔ A4 ေက်ာ္စြာနဲ႔အတူ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ ညီမေလးေရ။